Madaxweynihii Hore Ee Juventus Oo Weerar Culus Ku Qaaday Cristiano Ronaldo Ka Dib Markii Uu Sawirkaan Kaga Careysiiyay Xiddigaha Juve & Taageerayaasha | Laacib.net
Madaxweynihii Hore Ee Juventus Oo Weerar Culus Ku Qaaday Cristiano Ronaldo Ka Dib Markii Uu Sawirkaan Kaga Careysiiyay Xiddigaha Juve & Taageerayaasha
March 26, 2020 Balaleti Comments Off on Madaxweynihii Hore Ee Juventus Oo Weerar Culus Ku Qaaday Cristiano Ronaldo Ka Dib Markii Uu Sawirkaan Kaga Careysiiyay Xiddigaha Juve & Taageerayaasha
Ka dib markii Daniele Rugani laga helay caabuqa Coronavirus, Juventus waxay ka mid ah kooxihii ugu horeeyay ee karantiil geliya ciyaartoydooda iyadoo Covid-19 uu si weyn ugu faafayay Talyaaniga.
Si kastaba, madaama hooyada dhashay Cristiano Ronaldo uu ku dhacay wadno xanuun, ciyaaryahanka ayaa loo ogolaaday inuu u safro dalkiisa Portugal oo uu la joogo hooyadiis. Waxaana lagu amray inuu halkaas karantiil isku geliyo. Hooyadiis haatan cusbitaalka waa laga soo saaray.
Juventus ayaa ogolaansho u siiyay Cristiano Ronaldo inuu u safro hooyadiis laakiin madaxweynihii hore ee kooxda Giovanni Cobolli Ggigi oo wareysi siiyay Radio Punto Nuovo ayaa sheegay inay taasi qalad weyn aheyd islamarkaana ay keentay inay ka careysiiso xiddigaha kale ee kooxda Juventus iyo taageerayaasha kooxda.
“Xaalada Juventus waa ay sii adkaatay markii uu Cristiano Ronaldo baxay. Waxa uu sheegay inuu Portugal aadayo si uu u la joogo hooyadiis, laakiin haatan waxay u muuqataa inuu sawiro ku galayo barkada lagu dabaasho.
“Markii isaga sharciga karantiilka loo bedelay oo loo ogolaaday inuu safro, xaalada ayaa adkaatay, sababtoo ah ciyaartoyda kale ayaa iyagana doonayay inay baxaan. Ma aheyn inay sidaan dhacdo. Qof walba in karantiil la geliyo ayay aheyd.”
Cristiano Ronaldo ayaa sawiro badan soo dhigay barihiisa bulshada maalmihii ugu danbeysay, iyadoo walaashiis Katia Aveiro ay soo dhigtay sawir uu jirkiisa si fiican u dhisay taasoo ka careysiisay taageerayaasha Juventus.
Madaxweynihii hore ee Juve ayaa sidoo kale sheegay in Ronaldo uu dhibtoon doono marka uu ku soo laabto Italy.
“Waa ay sahlan tahay in haatan la eedeeyo, laakiin marka aan dusha ka eego, ma fahmi karo sababta ciyaartoyda qaar ay u doonayaan inay ka tagaan Italy. Marka ay soo laabtaan waa ay ku adkaan doontaa inay taam ahaansho buuxda helaan sababtoo ah waxay u baahnaan doonaan in 14 maalmood kale ay karantill galaan.”